एक राम्रो निःशुल्क AutoCAD २०१ course कोर्स - Geofumadas
घर/अटोक्याड-Autodesk/अटोक्याड मुक्त 2013 को राम्रो पाठ्यक्रम
अटोक्याड-Autodeskशिक्षण CAD / जीआईएस
अटोक्याड मुक्त 2013 को राम्रो पाठ्यक्रम
कसले नि: शुल्क AutoCAD कोर्स अनलाइन चाहँदैन ...
अन्तत: AutoCAD सिक्नको लागि एक राम्रो प्रशिक्षकको साथ औपचारिक पाठ्यक्रम लिनु जस्तो केहि छैन। तर विकल्प मैले तपाईंलाई देखाउँदै छु केही हदसम्म छक्क परेको छ, जुन AutoCAD २०१२ लाई धेरै अघि आयो भनेर विचार गर्दै। यो AutoCAD २०१२ कोर्स हो जुन Guía Inmediatas.com को लेखक द्वारा पदोन्नति गरिएको थियो, जसको अस्तित्व रहेको कोर्स समायोजित गर्ने इच्छा थियो र अझै पनि AutoCAD 2008 को लागि बनी रहन्छ तर अब नयाँ इन्टरफेस र नवीनतम अन्तर्गत AutoCAD 2012 मा नयाँ के हो?.
यस कोर्सको सब भन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि यो भिडियोमा अडियो व्याख्या गर्दै चरण-दर-चरण, केहि थप पोष्ट-प्रोड्स एड्सको साथ जुन तपाईंलाई व्यक्तिगत स्वाद र अनुग्रह दिन्छ। यस तरिकाबाट सिक्नु धेरै व्यावहारिक हो, विशेष गरी ती प्रयोगकर्ताहरूका लागि जसले पहिले नै AutoCAD लाई चिन्छन्, तर जसले दृश्य इन्टर्फेसको नयाँ सुविधाहरूसँग केही हदसम्म हराउँछन्, विशेष गरी यो प्रयोगकर्ता हो जसले पाठ्यक्रम लिदैन तर आत्म-सिकाएको तरिकामा सिक्छ। मैले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि पाठ्यक्रम पनि उत्तम पाउँदछ किनकि दिनचर्याहरू व्यावहारिक कामको लागि अभिमुख हुन्छन्; यद्यपि यो अन्तमा व्यायामको साथ गर्न सक्दछ जुन पूरा कामको विकास गर्दछ, जस्तै शहरीकरण वा घर योजना, प्रत्येक कमाण्डलाई उनीहरू कहाँ छन् भन्ने अध्यायमा सन्दर्भ गर्दछ।
रिबनको कार्यक्षमता कसरी व्यावहारिक छ भनेर हेर्नुहोस्, कसैले कसैलाई अझ आशावादी साथ बतायो जो हाम्रो झण्डा भन्दा बढी वर्ष पहिले थियो।
यो मान्यता हुनुपर्दछ कि सबै मानिससँग यस प्रकारको सामग्रीलाई स्वतन्त्र ढंगले डिस्पोजल गर्ने इच्छा हुँदैन; इन्टरनेटले धेरै ज्ञानलाई हरेक दिन प्रजातान्त्रिक बनाउन अनुमति दिएको छ र कार्यक्रम सिक्न कम बहानाहरू। हामी यस उत्पादनको लेखक लुइस मनुएल गोन्जालेज नाभालाई धन्यवाद दिन्छौं। यहाँ उदाहरण छ, र शीर्षकहरूको सारांश तल जुन पहिले नै उपलब्ध छ, 400०० भन्दा बढी भिडियोहरू जुन खरीदको लागि पहिले नै उपलब्ध छ, अटोक्याडका लागि ब्लकहरूको प्याकेज र केही थप संसाधनहरू समावेश गर्दछ।
पहिलो भाग: ओटो सीएडी को मूल अवधारणाहरु
अध्याय 1: AutoCAD के हो?
अध्याय 2: ओटोक्याड 2012 स्क्रीन इन्टरफेस
अध्याय 3: एकाइहरु र निर्देशांक
अध्याय 4: आधारभूत ड्राइंग मापदण्ड
अध्याय 5: मूल वस्तुहरूको ज्यामिति
अध्याय 6: संयुक्त वस्तुहरू
अध्याय 7: वस्तु गुणहरू
अध्याय 9: वस्तु सन्दर्भ
अध्याय 10: वस्तु सन्दर्भ ट्रेसिङ
अध्याय 11: ध्रुव ट्रैकिंग
अध्याय 12: परामेटिक प्रतिबन्ध
अध्याय 13: नेभिगेशन 2D
अध्याय 14: दृश्य व्यवस्थापन
अध्याय 15: व्यक्तिगत समन्वय प्रणाली
चौथो खण्ड, वस्तुहरूको सरल निर्माण
अध्याय 16: छनौट विधिहरू
अध्याय 17: सरल संस्करण
अध्याय 18: उन्नत सम्पादन
अध्याय 19: Clamps
अध्याय 20: छायांकन, ग्रेडियन्ट, र कोटेशर
अध्याय 21: गुण प्यालेट
पाँचौं खण्ड, रेखाचित्रहरूको संगठन
अध्याय 22: सामान
अध्याय 23: ब्लक
अध्याय 24: बाह्य सन्दर्भ
अध्याय 25: चित्रांकन मा संसाधन
अध्याय 26: प्रश्नहरु
छैटौं सेक्शन, साइजिंग
अध्याय 27 आयाम
अध्याय 28 CAD मानकहरू
सातौं खण्ड, लेआउट र प्रकाशन
अध्याय 29 प्रिन्ट डिजाइन
अध्याय 30 मुद्रण कन्फिगर गर्दै
अध्याय 31 Autocad र इन्टरनेट
अध्याय 32 योजनाहरु को सेट
आठौं भाग, तीन-आयामी रेखाचित्र
अध्याय 33 3D मोडेलिंग स्पेस
34D मा अध्याय3एससीपी
अध्याय 35 3D मा हेर्दै
अध्याय 36 वस्तुहरू 3D
अध्याय 37 ठोस
अध्याय 38 सतहहरु
अध्याय 39 मेष
अध्याय 40 नमूना
यो कोर्स अनलाइन, नि: शुल्क लिइएको छ।
यहाँ AutoCAD 2012 अनलाइन कोर्स सुरू गर्नुहोस्
साथै पाठ्यक्रम तपाईं यूएस $ 34.99 को लागि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई इन्टरनेट जडानको बिना हेर्न
AutoCAD 2D र 3D को पूर्ण पाठ्यक्रम 477 भिडियोहरू
ब्राउजिङ विषयवस्तुहरूको लागि सरलीकृत ब्राउजर
सबै नमूना फाईलहरूअवश्य
17,000 रेखाचित्रहरू dwg de ब्लक र मोडेल 3D
255 अध्यायहरूमा डिजिटल पुस्तक पृष्ठहरू 40
अमेरिका र यूरोपमा कुनै पनि देशमा तपाईंको घरमा शिपिंगको समावेश रकम।
यो पेपैल, क्रेडिट कार्ड र बैंक ट्राफिक द्वारा खरिद गर्न सकिन्छ।
छुट कूपन पछि अस्थायी रूपमा Z द्वारा प्रदान गरियो! कूपन, पाठ्यक्रम फास्टस्प्रिंग सेवाको प्रयोग गरेर भुक्तान गरिएको छ, यो कि फरक फरक तरिकाले भुक्तान गर्न सकिन्छ जुन व्यक्तिले अनुरोध गरेको छ र स्थानीय मुद्राको बराबरमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
पहिलो तरिका क्रेडिट वा डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर हो।
दोस्रो पेपैल खाता मार्फत हो
तेस्रो एएच बैंक ट्राफिक मार्फत, जो अनलाइन शाखा हो। सबै देशहरूमा लागू हुँदैन।
पछि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तान्तरण द्वारा छ। यसको लागि तपाईले "खरीद अर्डर" छान्नु भएको छ, मेल मा संवाददाता बैंकको डेटा तपाईंको आफ्नै शहरमा तपाईंको प्राथमिकताको बैंकको साथ।
यदि तपाइँसँग अघिल्लो डिस्काउंट कुपन छ भने, वा पृष्ठको माध्यमबाट प्रचारितफेसबुक फ्यानहरू, तपाईं प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
ढुवानी एक्सप्रेस मेल हो, जुन3बाट5हप्ता सम्म दूरीमा पर्दछ; ढुवानी मेक्सिको छोड्छ, कारण यो देश भित्र भित्रै एक हप्तासम्म लिन सक्छ। हामी तपाईंलाई अनलाइन ट्रयाक गर्न कोड दिन्छौं।
भुक्तान प्राप्त भएपछि दुई व्यावसायिक दिन ढुवानी गरिन्छ, र यो मेक्सिकोबाट अप्रकाशित मार्गदर्शकहरू द्वारा गरिन्छ।
यो तपाईंको घर आइपुग्दा, तपाईं अनलाईन पाठ्यक्रमलाई सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँसँग प्रश्न छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि तपाईं विशेष पदोन्नतिहरूको बारेमा चिन्ता चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई पछ्याउनुहोस् फेसबुक o twitter
स्वतः सीएड 2012
Google Earth बाट 3D छविहरू र मोडेल आयात गर्नुहोस्
Geofumadas | आगन्तुकहरु: | १० देशहरूमा १०० शहरहरू
जनवरी, 2019 बजे
Assalom alekum autocad dasturini ohrganmoqchidim। +998946171616 टेल क्विन दस्तुरिनी
विजेता मनुअल ग्टियट्रेज स्यान्चेज भन्छिन्:
म हाई स्कूलको पहिलो वर्ष अध्ययन गर्दैछु र म autocad सिक्न चाहन्छु।
जोस जामानोनो भन्छिन्:
मैले तिनीहरूलाई जानकारी दिएँ कि म हालै ईन्जिनियरको रूपमा सेवानिवृत्त भएको छु, म ग्वाइकिल, इक्वाडोरमा बस्छु, र म एक बाइक AUTOCAP कोर्स लिन चाहन्छु।
नमस्कार र तपाईंको जवाफको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
यहाँ हेर्नुहोस् भन्छिन्:
ठीक छ, म बस तपाईंको छोटो छोटो टिप्पणी छोड्न चाहन्छु
साइट त्यसोभए यदि तपाइँ पढ्ने व्यक्तिहरू छन् भने तपाइँ हेर्न सक्नुहुनेछ।
कम से कम यो मैले देखेको छु। मलाई आशा छ कि तपाईं लेखन को रूप मा राख्नुहोस
तपाईंले अहिलेसम्म गर्नुभएको छ र यदि हामी भविष्यमा सहयोग गर्न सक्दछौं भने, तपाई मलाई पुष्टि गर्नुहुन्छ।
यो साँच्चै म चाहन्छु।
लुइस जुलिओस भन्छिन्:
नमस्ते यस्तो स्वत: अडियो जस्तै पाठ्यक्रममा भाग लिनको लागी धन्यवाद, जसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा विकास गर्न अनुमति दिन्छ
मैले स्वत: काम गर्ने पाठ्यक्रममा रुचि राखेको छु किनकि यो मेरो कामको विकास गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ
लुइस अलबर्टो रिआन भन्छिन्:
म भर्चुअल बस कोर्स लिन चाहन्छु तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र जब क्लासहरू धन्यवाद सुरु हुन्छ
नमस्कार! म यसको पाठ्यक्रमको साथ Autocad सिक्न चाहन्छु। किनभने यो थाहा छैन कि यो कसरी मेरो काममा राम्रो स्थितिको लागी आवेदनबाट रोक्न छ। म तिमीलाई कसरी भन्न सक्छु कि यो कसरी प्राप्त गर्न सक्छु। धन्यवाद
नमस्ते म यो साँच्चै नि: शुल्क, सादर हो भने स्वत: व्यायाम कोर्समा रुचि राख्छु
जर्ज espinosa ramirez भन्छिन्:
म यो पाठ्यक्रम लिन चाहन्छु कि म सिविल ईन्जिनियरिङ् अध्ययन गर्न चाहन्छु र मलाई थाहा छ कि यो एक आधारभूत उपकरण हो
जाभियर गोंजेलेज रियो भन्छिन्:
ओटोकोड-2012 चासोको हास्य मलाई धेरै धेरै।
felipe molina martinez भन्छिन्:
पर्ख कति लामो छ?
केही अटोक्याड र मलाई मुक्त cursom पठाउन सकिएन लागि शुरुआती कृपया ईन्जिनियरिङ् को कि शाखा आवश्यक छ।
लुइस बहादुर भन्छिन्:
म स्क्रैचबाट स्वत: पाड पाठ्यक्रम सिक्न चाहन्छु
कार्लोस कार्बालोलो भन्छिन्:
म autocad 2011 को मालिक छ, तपाईंसँग यो सिक्न पाठ्यक्रम छ।
म कोलम्बियामा छु, पाठ्यक्रमको मूल्य के हो।
तपाईं मलाई आफ्नो ईमेल पठाउन सक्नुहुनेछ।
म0धन्यवाद बाट यो सिक्न स्वत: स्वत: पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न चाहन्छु !!
यो किन खाली भन्नुहुन्छ ???
नमस्ते, म पनामा बाट छु र म पाठ्यक्रम किन्न चाहन्छु
रिकोर्डो चावेज भन्छिन्:
म शून्य स्तर (शुरुवात) बाट नि: शुल्क पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न चाहन्छु
जोस ramon rodriguea hdez। भन्छिन्:
म Zitacuaro Michoacan शहरमा बस्छु, त्यहाँ त्यहाँ पुग्न कत्ति लामो। र कुन बैंकमा भुक्तान गर्न सकिन्छ। बधाई छ
एलेजुन्ड्रो फर्नांडीज Villalobos भन्छिन्:
मलाई लाग्छ कि यो उत्कृष्ट हो कि यस्ता महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रमहरू लोकतान्त्रिक हुन् र धेरै विद्यार्थीहरू र मानिसहरू सिक्न चाहनेहरूको लागि उपलब्ध छन्।
हामीलाई एक corrreo पठाउनुहोस्, र किनभने हामी आफ्नो देशमा नहुन सक्छ र जटिल तपाईं कल हामी उपस्थित हुनेछ।
फेलिक्स अल्फाडो हनोन्डे RIVER भन्छिन्:
के तपाईं सँगै कुराकानी गर्नका लागि तपाईंको नम्बर टाँस्नुहुन्छ?
म साहसी मा छु!
एक पेरू एक हप्ता र अर्ध3को बारेमा लिन्छ।
यदि तपाइँ 2013 संस्करण खरीद गर्नुहुन्छ भने यो मात्र तपाईले 29.99 र उही दिनको डाउनलोड खर्च गर्दछ।
म आइक्टिओस शहरबाट पेरूबाट आएको पाठ्यक्रम खरीद गर्न चाहन्छु कि त्यहाँ त्यहाँ पुग्न सक्नेछ
arq राजाहरू भन्छिन्:
नमस्ते उत्कृष्ट प्रस्ताव, म निकोगुआबाट हुँ र म पाठ्यक्रम जान चाहन्छु।
म योगदान दिन चाहन्छु
http://www.cursolatinonica.vacau.com यस पृष्ठमा त्यहाँ स्वत: सङ्ग्रह, आर्किकड, आदिको पाठ्यक्रमहरू छन्। शुरुवात र उन्नत स्तरको लागि। जानुहोस् तपाईलाई मनपर्छ
यस पाठ्यक्रमको प्रस्तावको लागि धन्यवाद, र यदि म यो भन्दा बढि बनाउन जाँदैछु,
तिनीहरू एक पेन्सि चिनडाका बच्चा हुन् यसलाई निःशुल्क डाउनलोड गर्न दिनुहोस्
तीन हप्ता कोलम्बियामा
कोलंबिया पुग्न कति लामो लाग्छ? धन्यवाद।
अवश्य यो समावेश गरिएको छैन, AutoCAD यसको LT संस्करणमा 1,000 डलर भन्दा बढी छ। यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन कि यो 34.99 लागतमा एक पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ
यद्यपि, सिक्ने उद्देश्यका लागि, तपाईं पूर्ण संस्करणबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
यो एक सामान्य संस्करण जस्तै काम गर्दछ, मुद्रणको समयमा यो मात्र एक वाटरमार्क छ भन्छन् कि यो एक शैक्षिक संस्करण हो।
म यसलाई रोचक खोज्छु तर मलाई एक शक छ कि ओटोकड कार्यक्रम समावेश गरिएको छ वा मलाई यो खरिद गर्नुपर्छ
यो कोर्स स्पेनबाट धेरै मान्छेद्वारा खरीद गरिएको छ, आगमनको समय लगभग4हप्ता हो, किनकि यसले मेक्सिको छोड्छ।
अहिले सम्म, कुनै पाठ्यक्रम कहिल्यै गुमाएको छैन र हामीसँग कुनै पनि गुनासो छैन।
gustavo hugo mendizabal vargas भन्छिन्:
म पाठ्यक्रम खरीद रुचि छु तर म स्पेन छु कसरी सुरक्षित पटक खरीद मेरो मामला मा बनेको छ ढुवानीको छ म यसलाई मेरो घर धन्यवाद पुग्न लिन्छ समय जान्न चाहनुहुन्छ
पाठ्यक्रम खरिदबाट सुरू गर्न बनाइएको छ, त्यसैले यसको नरोहनुहोस्।
यस्तो! पाठ्यक्रम मा म धेरै रुचि तर म दुवै मलाई शुरुवात रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाह चाहेको मान्छे माथि उल्लेख रूपमा?
elver tineo पट्टा भन्छिन्:
यी पाठ्यक्रमहरू साँच्चै के खोज्दै हुनुहुन्छ, कृपया मलाई भुक्तान खाता पठाउनुहोस्
ह्यूगो डेविला भन्छिन्:
नमस्ते यो पाठ्यक्रमले जटिल जटिल घटनाहरूका लागि सल्लाह वा ट्यूटोर गर्ने समावेश गर्दछ ?, कुन कुनले यो कसैलाई सिफारिस गर्दछ 100% शुरुवात।
हो, लेखको रूपमा, प्रो मेल ढुवानी समावेश गरिएको छ।
तपाइँ एक क्रेडिट कार्ड वा बैंक स्थानान्तरणसँग तिर्नुहुन्छ।
म क्ररसो को कोर्स को 35 डार्ल्स को लागि भुगतान को रूप मा खरीदना चाहते हो, यो सबै शामिल छ
raul alejandro lombana भन्छिन्:
मलाई autocad पाठ्यक्रम, मूल्य र ढुवानी विधि बारे थप जानकारी आवश्यक छ, यो रोचक छ
जुलियो सीजर रोरोरो गैलार्डो भन्छिन्:
म यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण खोज्छु जुन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ किनभने यो धेरै उपयोगी छ
इन्जे। जुलियो सीजर रोमोरो
मैले जानकारीको साथ मैले तपाईलाई एक इमेल पठाएको छु
नमस्कार इग्ग्नेजियो, मैले जानकारी तपाईंको ईमेलमा पठाएको छु।
ignacio acosta grajeda भन्छिन्:
म अधिक जानकारी चाहान्छु किनभने म कोर्स बधाई र धन्यवाद प्राप्त गर्नुमा धेरै रुचि छ
नमस्ते म यस कोर्समा रूचि राख्दछु र मलाई जानकारी पठाउन मलाई आवश्यक छ। मेरो ईमेलमा कृपया मलाई थाहा छ कि कसरी विश्वसनीय छ धन्यवाद।
यो कोर्स पोष्ट मेल द्वारा पठाईएको छ। यसले 34.99 डलर खर्च गर्दछ।
धेरै धेरै धन्यवाद के तपाइँ कृपया मलाई मेरो ईमेलमा नि: शुल्क पाठ्यक्रम पठाउन सक्नुहुन्छ?
यो सामान्यतया3र4हप्ताको बीचमा हुन्छ। म यो हप्ता आइपुगेको छु।
नमस्ते मैले पाठ्यक्रम2हप्ता पहिले किन्यो र यो आईपुग्दा आएको छैन म संयुक्त राज्यमा छु र म कुन मितिमा पुग्ने मितिको लागि जान्न चाहन्छु।
मलासा युद्ध भन्छिन्:
मलाई सिक्न कोरिरो मन पर्छ
म स्वत: स्वत: 2012 सिक्न चाहन्छु, कृपया मेरो इमेलमा निर्देशनहरू पठाउनको लागि मलाई पर्खनुहोस्।
नेल्सन Hernandez भन्छिन्:
नमस्कार, म नि: शुल्कको लागि AUTOCAD 2012 पाठ्यक्रम सिक्न मनपर्छ, कृपया मेरो मेल पठाउनुहोस् जुन मैले गर्नु पर्छ।
म कैली कोलम्बियामा बस्छु, धन्यवाद।
यदि तपाईं मेक्सिको सिटीमा हुनुहुन्छ भने ढुवानी एक हप्ता भन्दा कममा पुग्छ।
यदि तपाइँ यसलाई उठाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी5डलर छुट्यौं, जुन तपाईले 29.99 अमेरिकी डलरको बराबर तिर्नु हुनेछ।
तपाईंले एक इमेल पठाउनुपर्छ editor@geofumadas.com तपाईंलाई छुट्याउने कोड र ठेगाना जहाँ तपाइँ यसलाई हटाउनु पर्छ।
नमस्कार, फेरि तिनीहरूलाई परेशान गर्दै, मलाई थाहा छैन कि मैले मेल पठाउनुभएन भने मलाई थाहा छैन कि मैले ईमेल गरेँ lilivar2@hotmail.com। र म मेक्सिको सीडीमा जान चाहन्छु यदि यो सम्भव छ कि त्यो ठेगानाको साथ साझेदारी गर्न सम्भव छ।
नमस्कार, म स्वतन्त्र स्वत: पाठ्यक्रमको पाठ्यक्रम गर्न चाहन्छु, कृपया यसलाई जानकारी दिन पठाउनुहोस्।
तपाईंको भौतिक ठेगानाको लागि पाठ्यक्रम एक हप्ता भन्दा कम हुनेछ, किनभने यसले मेक्सिको छोड्छ।
पाठ्यक्रमको जानकारी लेखमा छ, मेलद्वारा तपाईलाई व्याख्या गर्न धेरै अधिक छैन।
jose gonzalez भन्छिन्:
नमस्ते, शुभ दिउँसो, म स्वत: पाठ्यक्रमको पाठ्यक्रम लिन चाहानुहुन्छ, तपाई मलाई जानकारी पठाउनुहोस् मेरो इ-मेलमा। म साल्टिलो, कोआहुला, मेक्समा बस्छु।
हो, मेकानिकल डिजाइनमा त्यहाँ AutoCAD को धेरै उपलब्धि छ।
यस कोर्समा त्यहि मूल्य छ, चाहे यो जहाँ जान्छ त्यो ठाउँ। यो US $ 34.99 हो जुन तपाईं बैंक ट्राफिक द्वारा स्थानीय बैंकमा तिर्न सक्नुहुन्छ।
जाभियर अप्रिल भन्छिन्:
म एक औद्योगिक मेकेनिक हुँ र म कार कार मा आकर्षित गर्न को लागि धेरै को आवश्यकता हो। म जान्न चाहन्छु कि म यो मेकानिक्समा आवेदन गर्ने एक राम्रो मौका छ। र यदि तपाईंले मलाई स्पान्सेली भाषामा पाठ्यक्रम र यो लागत पठाउन सक्नुहुनेछ। म इक्वेडरको घरबाट छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईंको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा
मूल्य $ 34.95 हो।
यो थोडीको लागि प्रचारमा थियो, तर केवल पेपैल भुक्तानीमा, ढुवानी सहित।
तर, मूल्य $ 25 = 68.00 तलहरु हो। र त्यो विकल्पमा 98.00 तलहरु .. ???
तपाईं पनि बैंक ट्राफिक द्वारा पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
"अहिले किन्नुहोस्" लिङ्कमा
"खरीद अर्डर" विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्, र जब तपाइँ तपाइँको डेटा थप्नुहुन्छ, तपाइँले इमेल द्वारा आवश्यक बैंक डाटा प्राप्त गर्नुहुनेछ ताकि तपाइँ यसलाई बैंक स्थानान्तरण द्वारा गर्न सक्नुहुनेछ।
भुक्तानी मात्र पे-पाल द्वारा बनाइएको छ? मलाई थाहा छैन कि यस तरिकामा भुक्तानी कसरी गर्ने .. = (
म पाठ्यक्रम खरीद गर्न चाहन्छु। कुनै खाता नम्बर कुनै बैंकमा ..
ढुवानी पेरू हो।
खरिद आदेश विकल्प छनौट गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो डेटा प्रविष्टि गरेपछि, संवाददाता बैंक डेटा ढुवानीको लागि मेल पुग्छ। यसको साथ तपाईं बैंक जानुहोस् र तपाईं स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। मूल्यले मेलमार्फत तपाईंको ठेगानामा ढुवानी समावेश गर्दछ।
अलेजुन्डो मोरोनो हमन भन्छिन्:
म पेरू क्षेत्र एनाशमा बस्छु म मेरो कामको रूपमा पाठ्यक्रम खरीद गर्न चाहन्छु
हामीले पहिले नै तपाईंको ईमेलमा डेटा पठाएका छौं।
पाठ्यक्रम 34.99 अमेरिकी डलर खर्च गर्दछ। शिपिंग लागत समावेश गर्दछ।
यसमा एक मुद्रित पुस्तक समावेश छैन, तर DVD मा भिडियोहरू, एक व्याख्यात्मक डिजिटल पुस्तक समावेश छ।
TITO MEDINA भन्छिन्:
म वेनेजुएला नेस्सेसरो मा लाइव कोर्स मा रुचि छ पूर्ण पाठ्यक्रम को लागत हो र यदि तिनीहरू सबै (बुक र डीभिडी) संग आउछन् भने
म पाठ्यक्रम खरीद गर्न धेरै चासो छु। तपाईं मलाई मेरो अर्डर राख्न आवश्यक जानकारी पठाउन सक्नुहुनेछ, म मोरिलिया, माइक बाट लेख्छु
त्यो राम्रो छ जस्तो कि तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ, मेक्सिको भित्र यो पाठ्यक्रम 8 दिन भन्दा कम हुन्छ।
Macario Calvario Molina भन्छिन्:
राम्रो पाठ्यक्रम, म यो सिफारिस पठाएको छ कि यदि मैले राम्रो हालत मा धन्यवाद
जुलियो अल्बर्टो ट्राफिकेन्ट गौतिरेज भन्छिन्:
नमस्कार, म AutoCAD सिक्न चाहन्छु, म भेनेजुएला र 100 Kms मा बस्छु। जहाँ म बस्छु तिनीहरू पाठ्यक्रममा निस्किन्छन्, म जान चाहन्छु कि मेरो लागि उत्तम के हो, यदि म पाठ्यक्रम वा हरेक हप्ता यात्रा गर्छु।
हामी ओटोक्याड प्रोग्राम बेच्दैनौं, तर तपाई यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ http://students.autodesk.com
हामीले बेचेको यो कसरी प्रयोग गर्न सिक्ने पाठ्यक्रम हो, मूल्य 34.99 अमेरिकी डलर हो, तपाईंको ठेगानामा ढुवानी समावेश गर्दछ। तपाईंले PayPal सँग सम्बन्धित PayPal वा क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ।
यो FastSpring सेवाको साथ, बैंक स्थानान्तरण द्वारा पनि गर्न सकिन्छ
रुक एल्न्सोसो कास्ट्रो अरिया भन्छिन्:
म स्वत: 2012, कोलम्बियामा भुक्तानको फारमको मूल्य जान्न चाहन्छु, जहाँ शिपिंग फारम भर्खर र मेरो आफ्नै योजना बनाउन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्न चाहन्छु, म एउटा वास्तुकार हुँ।
यो कोर्स तपाईंको समयमा र भिडीयो पछ्याइएको अनलाइनमा लिइएको छ।
मान्यता विस्तार गरिएको छैन।
यदि तपाईं मेलद्वारा डीभीडी अर्डर गर्नुहुन्छ भने, पाठ्यक्रम अभ्यासहरू, AutoCAD का लागि ब्लकहरू र तपाईंले अनलाइन हेर्नुहुने सबै भिडियोहरू तपाईंलाई पनि पठाइन्छ। लागत प्रतीकात्मक छ, यदि तपाईंले विचार गर्नुभयो कि मानले तपाईंको घरको लागि शपिंग समावेश गर्दछ ... चाहे तपाईं जहाँ भए पनि।
कुनैपनि अवस्थाहरूमा मान्यता प्रदान गरिएको छैन।
नमस्कार, म अर्जेन्टिनाबाट छु, म पाठ्यक्रम बारे थप जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छु, डिलीवरी र उही शुल्कको सन्दर्भमा, अन्तमा केही प्रमाणपत्र विस्तारित छ? म यो गर्न रुचि राख्छु, त्यसैले म तपाईंको जवाफको प्रतीक्षा गर्नेछु।
मेरा सादर, .... म AutoCAD कोर्स सिक्न चाहान्छु
उनी विवरण विस्तार गर्न सक्थे।
मर्सिडीज Giuffrida भन्छिन्:
मेरा अभिवादन प्राप्त गर्नुहोस्। म एउटा वास्तुकार हुँ, स्वत: को शुरुआती र मैले अनलाइन 2012 स्वत: पाठ्यक्रममा रुचि राख्दछु। कृपया नि: शुल्क पाठ्यक्रम लिनको लागी मेरो ई-मेलको लिङ्क पठाउनुहोस्, धन्यवाद!
म अर्जेन्टिना सेन्टियागो डेल एस्टोको हुँ, र मलाई स्पेनीमा एक ओटो सीएडी नागरिक 3D 2012 कोर्स चाहिन्छ। धन्यवाद
इगिलिविल अल्फ्रेडो एन भन्छिन्:
म धेरै अधिक Auto CAD जान्न चाहन्छु
मैले कार पुस्तकहरू अनलाइन कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? भन्छिन्:
म स्वत: सीड सिक्न चाहन्छु
सिबिला गोंजेलेज भन्छिन्:
म autocad जान्न आवश्यक छ, किनभने म वास्तुकार हुँ र म आफ्नै योजनाहरू बनाउन चाहन्छु।
तपाईंले 34.99 डलर तिर्नु भएको छ र हामी त्यसलाई तपाईलाई दिएका ठेगानामा पठाउनुहुन्छ भुक्तानी गर्दा।
निस्सन्देह, यो मेक्सिकोबाट पठाइएको छ। त्यसैले हामी त्यही मूल्यको लागि क्यानाडामा पठाउछौँ।
एडविन Ortiz भन्छिन्:
म पाठ्यक्रममा रुचि राख्छु र म यो बोलिभियन हुँ कि यो खरीद गर्न चाहन्छु, जस्तै म यो गर्न चाहन्छु
म टोरंटो क्यानडामा बस्छु र म जान्छु कि उनि मलाई यो पाठ्यक्रम पठाउन सक्छ वा यदि उनीसँग पहिल्यै स्वत: 2013 छ किनभने मैले प्रोग्राम स्थापित गरेको छु!
धन्यवाद, मैले पढें
विक्टर GLZ भन्छिन्:
म प्रशिक्षित गर्न चाहन्छु कि यिनी फोनों को लागि संचार को संपर्क गर्नुहोस ****** / ******* रित्तै प्राकृतिक रूप संग या मेल को धन्यवाद र ग्रेटिंग्स को बारे मा जानकारी पठाउनुहोस्
यो सिर्फ एक पाठ्यक्रम हो।
james perdomo भन्छिन्:
मलाई थाहा छ कि यससँग soflware autocad revit वास्तुकला सुइट 2012 को इजाजतपत्र छ
म एक कोच जान्न चाहन्छु म Banfield बाट छु। म 18 स्कूलमा जानुहुन्छ: 30 देखि 23 म यो समय भन्दा पहिले धन्यवाद गर्न सक्नुहुन्छ।
लेरोर्डो हेडेडेन भन्छिन्:
उनी सिविल सिड कोर्स गर्न चाहन्छन्, मलाई लागत जान्न आवश्यक छ र उनी कहाँ आउँछन्
luis alfonso chacon contrera भन्छिन्:
म लेख्न चाहन्छु
यसले 34.99 डलर खर्च गर्दछ, शिपिंग समावेश गर्दछ।
भुक्तानीको मोड PayPal सँग सम्बन्धित र बैंक ट्राफिकको साथ पनि पेपैल वा क्रेडिट कार्ड हो।
fabian posada भन्छिन्:
मलाई कोलम्बियामा आटोकडको रूचिमा रुचि छ जुन हेरेको लायक छ, र म कसरी लेनदेन गर्छु
जेनिरी एस्पियोनोजा लोयोला भन्छिन्:
म यो स्वत: कार्यक्रम कार्यक्रम सिक्न मनपर्छ
हामी क्रेडिट कार्ड, पेपैल र बैंक ट्राफिक पनि स्वीकार गर्छौं।
मूल्य 34.99 अमेरिकी डलर हो वा यसको तुलनामा स्थानीय मुद्रामा बराबर छ।
त्यतिबेला मैले भेनेजुएलामा पाठ्यक्रमको लागि बोलिभारेमा तिर्ने मौका पाएको छु? कसरी व्यापारिक लेनदेन, कुन बैंकको माध्यमबाट?
म तपाईको मद्दतको कदर गर्छु, बधाई छ ……।
परी क्रस भन्छिन्:
म तपाईंको आटोड्याड कोर्समा रूचि राख्दछु, मेरो विशेषता उनीहरूको निर्माणमा वास्तविकता निर्माण नगरेसम्म पर्खालहरूको रेखाचित्र हो, विशेष गरी मलाई स्वत: टाढाको उपकरणलाई आकर्षित गर्न र केवल परेडहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ।
माइगुल भेडा लाल भन्छिन्:
म वास्तुकलाको शौकिया हुँ, म अन्तिम autocad 2012 सिक्न चाहन्छु।
हो, तपाईं त्यो मूल्यको लागि इटालीमा पठाउन सक्नुहुन्छ।
यो तपाईंसँग कुनै पनि कुरा छैन यदि तपाईं AutoCAD को संस्करण हो, आदेशहरू त्यहि छन्, फरक छ कि पाठ्यक्रम तपाईंको संस्करणमा वास्तुकला तालिकाहरू समावेश गर्दैन।
माइगेल एन्जल कार्डोजो भन्छिन्:
म इटालीमा बस्छु, तपाईं यसलाई यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ, म पनि स्वत: अर्डर आर्किटेक्चर 2009 छ, म के गर्न सक्छु?
PABLO ALARCÓN MARTÍNEZ भन्छिन्:
मैले फोरमको जवाफ पाउँछु?
तपाईंको घर आउनुहुँदा मलाई 2012 स्वत: पाठ्यक्रम चाहिन्छ
जब तपाइँ भुक्तानी लिङ्क पहुँच गर्नुहुन्छ, तपाइँ आफ्नो देशको मुद्रा रोज्न सक्नुहुनेछ र बराबर बराबर देखिन्छ।
luis eduardo plata huertas भन्छिन्:
हाय मनुअल म पाठ्यक्रममा मूल्य कोलम्बियन पेसोको मूल्य अग्रिम धन्यवाद चाहन्छु
आलेखमा पाठ्यक्रमको लागत मेल खाने गरी भौतिक ढाँचामा पठाउँदा व्याख्या गरिन्छ।
नमस्कार, म पाठ्यक्रमको लागत जान्न चाहन्छु
कोड हामीले हामीले दिईयो, तपाईं मेक्सिको पोस्टको ट्रयाकिंग क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, र यसले तपाईंलाई के भन्नु पर्ने छ कि कुन शर्तमा छ।
यो लिङ्क हो
कार्लोस हेरराज भन्छिन्:
एक अभिवादन म अन्तिम 13 /3/ 2012 लागि ठेगाना, म 2012 अटोक्याड पाठ्यक्रम, म प्राप्त पासवर्ड प्रविष्ट गर्न छैन, आदेश कसरी अनलाइन मार्फत ट्रयाक गर्न जान्न चाहनुहुन्छ आदेश दिए।
धेरै धेरै धन्यवाद, कार्लोस हेरराज
यदि तपाईं मेक्सिकोमा बस्नुहुन्छ भने तपाईं Bancomer लाई जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, समतुल्य 319 पेसो हो।
एकपटक जम्मा हुँदा तपाईंले हामीलाई स्क्यान गरिएको प्रतिलिपि वा जम्माको एक उपयुक्त फोटो पठाउनुहुनेछ र हामी यसलाई पठाउनेछौं।
पाठ्यक्रमको सबै सामग्री एक डीभिडीमा छ
शुभ दिउँसो मैले केही स्वत: अध्याय अध्यायहरू अनलाइन गरिरहेको छु र मैले उनीहरूलाई धेरै मनपर्थ्यो, र म धन्यबाद गर्छु जसले जसले सबै कार्यक्रमको लागि त्यो पाठ्यक्रम गर्नुभयो जुन त्यस कार्यक्रमको बारेमा जान्न र अद्यावधिक गर्न चाहन्छ।
म यस कार्यक्रममा घनिष्ठ मित्र हुँ र म धेरै दुःखी छु कि म यसलाई प्राप्त गर्न सोचिरहेको छु।
र म केवल केही प्रश्नहरू छन्:
शिपिंग सेवा सीडी सम्म पुग्छ। juarez chihuahua ??
र मेक्सिकन पेसोमा पाठ्यक्रमको मूल्य कति बराबर छ?
र पाठ्यक्रममा कति डीभिडी समावेश छ?
त्यो अग्रिम हुन सक्नुहुनेछ पाठ्यक्रम र बधाईको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
हो, तपाईं बैंक स्थान्तरण द्वारा तिर्न सक्नुहुन्छ।
कृपया, म 2012 ओटोक्याड कोर्समा रुचि राख्छु। मलाई थाहा छ कि यदि पाठ्यक्रम स्थानान्तरणको लागि भुक्तान गर्न सकिन्छ।
उत्कृष्ट भाइ हजुर धन्यवाद, म तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु।
मेरो कामको काममा सिक्ने र सुधार गर्नको लागि म autocad को आधारभूत पाठ्यक्रम जान्न चाहन्छु।
AutoCAD को कोर्स नि: शुल्क छ, तपाईंले यो पृष्ठमा हेर्नु भएको छ जुन हामीले लिंक गर्दैछौँ। स्वत: स्वत: स्वत: नयाँ संस्करणको नयाँ संस्करण प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ http://students.autodesk.com
जोस अमोडो अगुइरारा प्रश्न भन्छिन्:
मैले पाठ्यक्रममा नामांकन गर्न चाहन्छु भने मलाई नयाँ संस्करण सिक्न आवश्यक छ
तिनीहरू धेरै आभारी छन्।
नि: शुल्क ओटोक्याड 2012 कोर्स यहाँ छ:
तपाईं केवल यसलाई अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक लिङ्कमा प्रत्येक अध्यायबाट अडियोसँग एक भिडियो छ।
Gio Dine भन्छिन्:
कसरी Autocad 2012 को पाठ्यक्रम वा ट्यूटोरियल प्राप्त गर्न सक्छु? यद्यपि यो आधारभूत एक हो।
जाहिर छ तपाईं बधाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्न
Greetings Manuel Medina म autocad पाठ्यक्रम 2011 मा रुचि राख्छ तर म तपाईंको मेल देख्नुहुन्न, यहाँ म पठाउँछु ताकि हामी संवाद गरौं
Naviskork ओटोडेसक को एक प्रोग्राम पनि हो, यसलाई यसलाई अन्य ढाँचामा निर्यात गर्न माईक्रो छैन, किनभने त्यो प्रोग्राम फाइलहरू dwg
मलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि म कसरी नेभवर्क्स कार्यक्रममा अटोकेड फाइल देख्न सक्दछु .. यसलाई कसरी निर्यात गर्ने ताकि यो प्रोग्रामले यसलाई पढ्न सक्दछ ... ??
जूनियर vergara - पेरू भन्छिन्:
श्री नव को लागि यस विशाल योगदान को लागि धन्यवाद, वहाँ कम मान्छे हो जो स्वयं को पाठ्यक्रम को मुफ्त अध्ययन को लागि सुविधा प्रदान गर्छन को रूप मा उपयोगी को रूप मा autocad छ।
वाल्टर रुआ Cerón भन्छिन्:
म हाम्रो द्वारा सिकाइएको नि: शुल्क पाठ्यक्रमहरू सिक्न चाहन्छु; योजनाहरु को तयारी को बारे मा (सामान्य मा) ओटोक्र्याड 2D र 3D को मास्टर मा सक्षम हुन को लागी; विशेष गरी म हामीलाई बाट हटाउछु। तुरुन्तै भेट
म्यानुएल, अभिवादनलाई धन्यवाद र तपाईंको कामको साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छैन।
मार्को एंटोनियो भन्छिन्:
एक नि: शुल्क कोर्स, स्वत: सीडिया संग उत्कृष्ट समाचार
लुइस म्यानुएल गोंजलेज नव भन्छिन्:
म तपाईंलाई बताउन लेखेको छु कि Autocad 2012 को कोर्स स्क्रीनबाट वास्तविकताको लागि समाप्त भएको छ। आज मैले 40 र पृष्ठमा अन्तिम अध्याय अपलोड गरेको छु। यस सम्बन्धमा म केही टिप्पणीहरू गर्न चाहन्छु:
- म विशेष गरी तपाईंको साइट मा पाठ्यक्रम उल्लेख प्रशंसा गर्दछु। तपाईंको साइटबाट पृष्ठमा मैले प्राप्त गरेको भ्रमणहरू मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो।
- म सचेत छु कि पाठ्यक्रम धेरै मा सुधार गर्न सकिन्छ। यसको अर्को संस्करणमा म अवसरहरू लिने अवसरहरू लिने छु र विभिन्न शीर्षकहरूमा खोज्नेछु। जे भए पनि, यो त्यस्तो तरीकाले थियो कि यसको अपडेट एकदमै छिटो आउनेछ हामीसँग २०१ the को संस्करणको उपलब्ध छ र अहिले जस्तो छैन, जुन पूरा गर्न मलाई १० महिना लाग्यो, planned योजनाबद्ध भन्दा बढी।
- अर्को केही दिनमा मसँग उही पाठ्यक्रमको डिस्क संस्करण तयार छ, जसले यसलाई अनलाइन हेर्न र यसलाई डाउनलोड गर्न सोध्न गाह्रो लाग्छ। यो केहि अलि अतिरिक्त हुनेछ र यसको लागत धेरै सुलभ हुनेछ, यसका साथै नि: शुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध हुन जारी रहनेछ।
- साथै केहि दिनहरूमा यो केहिमा उपलब्ध हुनेछ, कम्तिमा मेरो लागि, इन्टरनेटमा नि: शुल्क कम्प्युटर पाठ्यक्रमहरूको लागि नम्बर १ साइट: http://www.aulaclic.es
म यो अवसामान दिन चाहने छुट्टै छुट्टिमा शुभकामना दिनेछु।
लुइस म्यानुएल गोंजलेज नव
german vargas भन्छिन्:
मेरो स्वतन्त्रता कसरी मुक्त हुन सक्छ
स्यान्ड्रा रड्रिगुज पाइन भन्छिन्:
नि: शुल्क 2012 स्वत: अवधारणा पाठ्यक्रममा रुचि राख्दछ
बी, बी, बी, बी, एम, एम, एम, बी,
AutoCAD 2012 को पूरा कोर्स लेख को अन्त मा चिह्नित लिंक मा छ
यो अनलाइन हेर्ने कुनै खर्च छैन।
MILTON OVIEDO भन्छिन्:
मलाई यो मन पर्छ, म यो पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न मनपर्छ कि म यसलाई निःशुल्क हुन चाहन्छु। उत्कृष्ट
भिडीयोहरू अनलाइन हेर्न चाहन्छन्। तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न।
लिने क्यामेराहरू भन्छिन्:
म कसरी क्लियर तल जान सक्छु म धेरै राम्रो देखि पहिले
उत्कृष्ट योगदान …… !!!!!!!!!!!!!!!!!!
भिडियोहरूमा पहुँच नि: शुल्क छ, केवल अप्रकाशित मार्गदर्शकहरूको लिङ्क पछ्याउनुहोस्।
एंटोनियो वर्ह्यूज भन्छिन्:
मलाई थाहा छ कि म कसरी रजस्टर गर्छु, र कस्तो पाठ्यक्रम लायक छ, र समयको समय, धन्यवाद।
AutoCAD कोर्स लिनको लागी, लिङ्कमा जानुहोस्
त्यहाँ प्रत्येक भिडियोको लिङ्कहरू छन्।
राम्रो योगदान .. म पारागुए र नमस्कारबाट छु
Valeska च्यानलहरु भन्छिन्:
नमस्ते, म यो कोर्स गर्न चाहन्छु र म थप जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
विया राजाहरू भन्छिन्:
नमस्कार, कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मलाई नि: शुल्क पाठ्यक्रम, साक्षरता चाहिन्छ
उत्कृष्ट कार्यक्रम तर कक्षाहरू अन्तर्गत
उत्कृष्ट कार्यक्रम को रूप मा कक्षाहरु को अंतर्गत
यदि तपाईं पाठ्यक्रमको लागि सोध्नुभयो भने, यो लामो समय सम्म तपाईंले निःशुल्क भिडियो हेर्नु भएको छ।
यदि तपाईं AutoCAD को लागि सोध्नुभयो भने, यो निःशुल्क छैन। यो ओटोडिस्कको स्वामित्व छ र यो खरिद गर्न आवश्यक छ, ओटोक्याड 2012 को एलटी संस्करण एक हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्दछ।
पाउला सालाजार भन्छिन्:
म कसरी यो कार्यक्रम छोड्न को लागी जान्न चाहानुहुन्छ र यो सिक्नको लागी यो स्वतन्त्र छ भने म त्यहाँको आधारभूत सूचना जानकारी कृपया UNPOC ओएडकोड एक्सएमएमक्स हुनेछु !!!
कोर्स डाउनलोड गर्न सकिँदैन, तपाईंले इन्टरनेटमा जोडिएको भिडियोहरू हेर्नु पर्छ।
नमस्ते, म AutoCAD को उपयोग गर्न को लागि नया हूँ, र म यस कोर्स को योगदान को लागि धन्यवाद गर्न चाहन्छु र म जान सक्छ कि यदि यो यसलाई कसरि डाउनलोड गर्न सक्छ, कसरि म यो धेरै सराहना गर्नेछु।
रबर्ट्स Basaldúa भन्छिन्:
AutoCAD २०१२ को नवीनताहरू जुन नयाँ बारहरू र आदेशहरूले AUTODESK सफ्टवेयरको नयाँ संस्करण प्रदान गर्दछ, यो सिभिल र ईन्जिनियरि inमा सिभिल र रोड निर्माणको साथ लागू हुन्छ।
नि: शुल्क छैन।
त्यहाँ इन्टरनेटमा केही कम्पनीहरू छन् जसले माइक्रोस्टेशनको लागि यस तरिकामा पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ, तर उनीहरूले भुक्तान गरेका छन्।
म एउटा लिङ्क छोड्छु:
तिनीहरूलाई छुट कोड "geofumadas" दिन भन्नुहोस्
म Microstation v8i को लागि यस्तो पाठ्यक्रम हो भने जान्न चाहन्छु?
स्वत: पाठ्यक्रम भन्छिन्:
धेरै राम्रो योगदान। म यो वास्तवमा यस कार्यक्रम हेरफेर गर्न धेरै अवसर, धेरै व्यवसायहरूमा आवश्यक आवश्यक मानिन्छ। यसको बहुउद्देश्य उपकरण, यसको उपयोग को आसानी र यसको इन्फेसेसन को स्पष्टीकरण यस कार्यक्रम को आर्किटेक्ट्स, ड्रुग्समेन, ग्राफिक डिजाइनरहरु, डेकरहरु, आदि को पसंदीदा मध्ये एक बनािन्छ।
CivilCAD मा पङ्क्तिबद्धहरू सिर्जना